ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: BAT File Format Lesson 8
BAT File Format Lesson 8
ဒီနေ့တော့ ကျနော် IF ERROR LEVEL နဲ့ CHOICE ကို ပေါင်းပြီးရေးသားနည်းကို ပြောပြပေးပါမယ်။
ပထမဦးစွာ ကျနော်တို့ဟာ CHOICE command က Error Level ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ Return ပြန်ပေးတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါသေးတယ်။ CHOICE command ကတော့ ကျနော်တို့ Program Run နေတုန်းမှာ key တစ်ခုခုနှိပ်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ERROR LEVEL ကို return ပြန်ပေးသလို /C မှာ ပါတဲ့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Key တစ်ခုခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ လည်း return ပြန်ပေးပါတယ်။ အောက်က ဥပမာလေးကို ကြည့်ပြီးနားလည်မှာပါ…
Error Level တွေကို မလေ့လာခင်မှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ တစ်ခုသိထားရမှာက Error Level Code တွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ User ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ keyပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတာပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ အပေါ်က Code မှာဆိုရင် S ကို နှိပ်ရင် ရမယ့် Error Level က 1 , Y ကို နှိပ်ရင်တော့2, 1 ကို နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့3ဖြစ်ပြီးတော့2ကို နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရရှိမယ့် error level က4ဆိုပြီးရရှိလာမှာပါ။ ဒီလောက် ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ဟာ CHOICE command အနေနဲ့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံမျိုးနဲ့ ERROR Level တွေကို Return ပြန်တယ်ဆိုတာ သိသွားပါပြီ။
အခု ဆက်လက်ပြီးတော့ IF ERROR LEVEL command က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ် ၊ သူ့ကို ဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာလေ့လာပါမယ်။ သူ့ရဲ့ ရေးသားပုံရေးသားနည်းကတော့…
အဲဒီ့ကောင်ကတော့ လက်ရှိ Error ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သာ အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ပေးထားတဲ့(စစ်ထားတဲ့) အခြေအနေတစ်ခု (Error Level တစ်ခု) ဟာ မှန်တယ်ဆိုတော့မှ Program က အလုပ်လုပ်မှာပါ။ အဲဒါကို ဥပမာ နဲ့ လေ့လာကြည့်ရအောင်…
IF ERRORLEVEL3ECHO OK
အပေါ်က Code ကို run မယ်ဆိုရင်တော့ အကယ်လို့ ကျနော်တို့ရဲ့ လက်ရှိ Error Level ကသာ3ဖြစ်မယ်ဆိုရင် OK ဆိုတာကို အမဲရောင်စကရင်မှာ မြင်ရမှာပါ။
မှတ်ရန် ၊၊ ၊၊ အရေးအကြီးဆုံး တစ်ချက်ကတော့ Error Level ကို If နဲ့ စစ်တဲ့ အခါမှာ စစ်လိုက်တဲ့ error level နဲ့ ရလာမယ့် error level ဟာ တူရင်တူ ၊ မတူရင်ကြီးနေမှ Program အလုပ်လုပ်ပါမယ်။
အပေါ်က Code မှာ ဆိုရင် Error Level ဟာ3ထက်ကြီး၇င်ကြီး မကြီးရင်တူမှ Program အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ဟာ CHOICE နဲ့ IF ERROR LEVEL အကြောင်းနားလည်သွားပြီဖြစ်လို့ သူတို့ ၂ ခုကို ပေါင်းစပ်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားရပါတော့မယ်။ တကယ်တော့ ကြိုးစားစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး သူတို့ ၂ ခုကို တစ်ခုချင်းစီကို သေချာနားလည်နေပြီဆိုရင်ကို ပေါင်းစပ်ဖို့က တော်တော်လေး လွယ်သွားပါပြီ။
သူတို့ ၂ ခုကို အသေအချာ ပေါင်းစပ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ဟာ Bat နဲ့ Menu Based Program တွေကို အလွယ်တကူ ရေးသားနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာပြီလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ အောက်က ဥပမာလေးကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ အဲဒီ့ ဥပမာဟာဆိုရင်တော့ User ဆီကနေပြီးတော့ အသုံးပြုဖို့ Browser တစ်ခုကို Menu အနေနဲ့ ရွေးခိုင်းတာပါ။
(ဒီနေရာမှာ ကျနော် တစ်ခုပြန်ပြောချင်တာကတော့ ကျနော် အရင်က Site Selection Batch ဆိုပြီးတော့ bat file တစ်ခု ဒီဖိုရမ်ထဲမှာ ရေးပေးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ အဲဒါလေးနဲ့ အခုဥပမာ ပြမယ့်ဟာက သဘောတရားတူနေလို့ ကျနော် သတိရလို့ ပြန်ပြောတာပါ။ အခု Post ကို ဖတ်ပြီးရင် အဲဒီ့ site selection batch ကို မဖတ်ရသေးရင် သွားဖတ်ပြီးတော့ လေ့လာလိုက်ပါ။ Code တွေကို အလွယ်တကူ နားလည်ပါလိမ့်မယ်။)
ကဲ အောက်က ဥပမာ ဆီဆက်လိုက်ရအောင်….
ECHO 1. Internet Explorer
ECHO 2. Mozilla Firefox
CHOICE “Please Choose Your Browser” /C:12x /N
IF ERRORLEVEL2START C:\_progra~1\_firefox.exe
သတိပြုရန် >> အပေါ်က Code မှာ IF ERROR LEVEL ကို အများကနေ အနည်း (၃ ကနေ ၁) ကို ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီထားတာကို သတိပြုမိစေချင်ပါတယ်။
ကျနော် ဒီနေ့တော့ ကျနော့် Tutorial ၊ ကျနော့် ရေးသားပုံ ၊ ဆွေးနွေးပုံ ဘယ်လောက်ထိရောက်တယ် ဆိုတာကို စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ အပေါ်က ဥပမာ ပြလိုက်တဲ့ Code ကို အစအဆုံးမရှင်းပြတော့ပါဘူး။
လွယ်လည်း လွယ်လို့ပါ။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကို ဘာကဘယ်လိုဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အရင်ကလို ကျနော် အစအဆုံး ရှင်းပြနေရင် အစ်ကို ၊ အစ်မ တို့အနေနဲ့လည်း တကယ်နားလည်မလည် ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်မသိနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့တော့ အခု ကျနော်ပေးတဲ့ ဥပမာကို မဖတ်ခင် အပေါ်က CHOICE နဲ့ IF ERROR LEVEL ဆိုတဲ့ Command အကြောင်းကို အရင်ဖတ်ပါ ၊ သူတို့ ၂ ခုကို နားလည်ပြီဆိုမှ ဒီ ဥပမာကို ဖတ်ပါ။ အကယ်လို့ CHOICE နဲ့ IF ERROR LEVEL command တွေကိုသာ တကယ်နားလည်သွားပြီ ဆိုရင် ဖတ်ရင်းနဲ့တင် ဒီဥပမာကို သဘောပေါက်နေပါပြီ။ အဲဒီ့လိုဆိုရင် ကျနော် ရေးပေးရကျိုးလည်းနပ်ပါပြီ။ အကယ်လို့ အဲလိုလုပ်တာတောင် နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော့်ရေးသားတင်ပြပုံ ၊ ဆွေးနွေးပုံတွေ တစ်ခုမှမကောင်းဘူးဟုသာ Feedback ပေးခဲ့ပါ။ ကျနော်လည်း ဘယ်သောအခါမှ Tutorial ဆိုတာတွေကို ကိုယ်တိုင်လည်း ဆက်မရေးတော့သလို ၊ ဘာသာပြန်ပြီးတော့တောင် မရေးတော့ပါဘူး။
အခုတော့ ကျနော် ကိုယ်တိုင် ဒီ Bat ပိုင်းကို ပြန်လည်စိတ်ပါလာပြီဖြစ်လို့ အစက IF နဲ့ တင်ရပ်လိုက်တော့မလို့ဟာ အခု CHOICE ရယ် Error Level အထိပါရောက်လာပါပြီ။ နောက်ရက်တွေလည်း bat နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်ရေးပေးဖို့ စာပြန်ဖတ်နေပါတယ်။ ရေးသင့်မရေးသင့်ကတော့ အခု Post တင်ပြီး ပြန်ဝင်လာတဲ့ Feedback တွေပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။ Feedback က အမျိုးမျိုးရနိုင်တော့ ကျနော် (၃) ရက် စောင့်မယ်လို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ အဲလိုစောင့်ရတာကတော့ ကျနော်က ဒီဖိုရမ်မှာတင်မဟုတ်ဘူး တခြားဖိုရမ်တွေမှာပါ လိုက်တင်ထားလို့ပါ။ (၃) ရက်ဟာ လုံလောက်တဲ့ Feedback ရနိုင်တဲ့ အချိန်လို့ထင်လို့စောင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ စောင့်နေတဲ့ (၃) ရက်တာ ကာလအတွင်းမှာတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ Reversing Tutorial တွေ ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ Reverse Engineering နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း စတင်လေ့လာသူဆိုတော့ သိပ်မသိသေးလို့ လေ့လာမိသလောက် တွေကိုသာ ရေးဖြစ်ဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အခု bat file လိုတော့ ဖိုရမ်တွေမှာ လိုက်ပြီးတင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် မနေ့ကမှ ဖွင့်လိုက်တဲ့ဘလော့လေး နဲ့ ကျနော့် ဖိုရမ်မှာ တင်ပြီးတော့ ၄ ခု ၊ ၅ ခုလောက်တစ်ခါ E-BOOK လုပ်ပြီးမှ ဖိုရမ်တွေမှာ ပြန်မျှဝေမယ်လို့လည်းစိတ်ကူးထားပါတယ်။ ဒီစိတ်ကူးတွေ လက်တွေ့ ဖြစ်မဖြစ်ကတော့ ကျနော် ကိုယ်တိုင်တောင် အသေအချာ မသိလို့ ကတိမပေးနိုင်ပါဘူး… အဲဒီ့တော့ စိတ်ကူးအနေနဲ့သာ ကြိုတင်ပြောထားရင်း ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ နားပါရစေဦး…
Feedback များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျနော်လက်ခံထားသော ဆောင်ပုဒ်…
“သင့်ကို လက်ခံတဲ့သူ အယောက် ၁ ထောင် ရှိနေပြီလား ၊ နည်းနေသေးပါတယ် ၊ ဆက်ကြိုးစားပါ။
သင့်ကို ကန့်ကွက်တဲ့သူ ၁ ယောက် ရှိနေပြီတဲ့လား ၊ များလွန်းနေပြီ ၊ ထိုသူ လက်ခံလာအောင် အချိန်မီ ပြုပြင်ပါတော့။”
Feedback များကို စောင့်မျှော်လျက်
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 7:41 AM